Iincwadi ezi-5 malunga nokuvunwa kweediliya. Kubalandeli bewayini noncwadi | Uncwadi lwangoku
Isivuno sikwafika ngoSeptemba. Kwezinye iindawo sele iqalile, ixhomekeke kwimozulu kunye nomhlaba, kunjalo. Ke abathandi bewayini, yeewayini ezininzi ezintle njengoko sinayo eSpain, balinde eliza kuza nephulo elitsha. Okwangoku, okanye ngokufanayo, banokufunda incwadi. Singakwazi sonke. Namhlanje ndizisa izihloko ezi-5 zamabali, ngenxa, malunga nokujikeleza isivuno seediliya, izidiliya, iwayini kunye nezinye izinto zokubhangqa kuzo zonke izinto ozithandayo.
1 Ukuthula kwezidiliya - Gisela Pou
2 Kwaye bemka - uViviana Rivero
3 Isivuno seidiliya sePlinio - uFrancisco García Pavón
4 Isipha soyika - uXabier Gutiérrez
5 Indawo yotywala - uNowa Gordon
Ukuthula kwezidiliya -Gisela Pou
Kukhutshwa njenge inoveli enkulu malunga nehlabathi le-cava, Ibekwe kwizidiliya ze Penedes, ekuqaleni kwenkulungwane yama-XNUMX. Isixelela ibali lika Isarga yaseBrucart, usapho olukhokelwa ngumphathi, u-Aurora, umfazi ojike ishishini lakhe laba lelinye lamagunya aphambili kwihlabathi kwimveliso ye-cava. Embindini wecebo elipheleleyo eligcwele iyunivesi inkohliso, umona, iingxabano zangaphambili kunye nokufuna ukuziphindezela.
Kwaye bahamba - UViviana Rivero
Asishiyi kwiminyaka yokuqala yekhulu lama-XNUMX, kwaye asishiyi iintsapho ezenza iwayini okanye abafazi abaphambili. Kodwa ngoku sikwidolophu yase Andalusia igama lakhe ngu UIsabel Ayala, osapho lwabo lusokola ngenxa yesibetho esitshabalalisa izidiliya zabo. UIsabel unjalo ndithandana noAntonio Ruiz, kodwa ukuze asindise usapho lwakhe ekonakaleni kufuneka atshate UPaco Reyes, ngomnye wabambalwa abathengise imihlaba yabo ngaphambi kweso sibetho.
Naye uya kuye Argentina kwaye uzinikezela ngokupheleleyo emsebenzini. Kodwa nangona beqhuba kakuhle kwaye benonyana, U-Isabel akakwazi ukulibala u-Antonio, eziya kuvela kwakhona ngokungalindelekanga.
Isivuno seediliya sikaPlinio - UFrancisco García Pavón
Ukusuka eLa Mancha nokuba ngo-Septemba, kunye ikhulu leminyaka lokuzalwa kukaGarcía Pavón, Awunakuphosa esi sihloko sikhulu IPlinio. Ndiyaphinda ndincoma ukuba uzicwilise kwihlabathi laseLa Mancha, ngexesha lokuvuna naseTomelloso, apho ukuba kukho into engekhoyo zizidiliya kunye newayini elungileyo. Ngeli xesha uPliny kuya kufuneka aphande ukufunyanwa kwedrowa nesidumbu somfazi osele ekhulile kodwa oko kuthi shwaka kwangoko kwaye kushiye bonke abantu kunye nomphathi wamapolisa kamasipala utomellosera.
Njengesiqhelo kwimisebenzi kaGarcía Pavón, lUphando luphantse lwadlula kwinkcazo yemo engqongileyo kunye nokukhupha izihloko zemihla ngemihla yobomi edolophini, ukongeza kumyalelo wakhe obalaseleyo wolwimi olutyebileyo esele lilahlekile.
Isixa soloyiko -UXabier Gutiérrez
UXabier Gutiérrez uthathelwa ingqalelo umyili we Mnyama gastronomic kwaye eli bali lenzeka phakathi kwezidiliya zaseRiojan kunye nendawo ekhula kuyo iwayini.
Kwenzeka ngo-Septemba kwaye, kungekudala ngaphambi kokuvuna, uSekela-Khomishina we-Ertzaintza Vicente Parra kufuneka iphande ngemeko ye- Ukubulawa kwe-oenologist u-Esperanza Moreno, ophetheyo ukwenza iwayini ye IBodegas Sáenz, yenye yezona zibalulekileyo eLa Rioja. Umzimba wakhe ufunyenwe kwiflethi yakhe kwikota endala ye San Sebastián, kunye nomqala.
Yonke into ibonisa ukuba yi ulwaphulo-mthetho lokuthanda, kodwa emva koko isoka lexhoba, uRoberto, liyanyamalala, Umqhubi wekhamera kwenye yemiboniso yokupheka ephumeleleyo elizweni kwaye ekhokelwa ngumpheki owaziwayo.
Indawo yotywala -U-Noah Gordon
Kwaye ekugqibeleni sinayo othengisa kakhulu ngeli bali libekiwe ILanguedoc Ekupheleni kwenkulungwane ye-XNUMX. Umlinganiswa ophambili ngu UJosep Alvarez, Ofumanisa ubugcisa bokwenza iwayini esandleni seFiticulturist yaseFrance. Ukususela kuloo mzuzu uya kunikela ubomi bakhe kuloo mnqweno. Kodwa, ngenxa yeemeko, kuya kufuneka babaleke eFrance. Engqondweni yakhe kukwenza iwayini elungileyo. Kwaye ujikeleze imeko ye abalinganiswa, amabali kunye nemizobo yexesha Nesimbo sophawu sikaGordon esingadanisi amawaka wabalandeli.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » Iincwadi ezi-5 malunga nokuvunwa kweediliya. Kubalandeli beewayini ezilungileyo kunye noncwadi